Nge-4 kaDisemba i-Snapdragon 8150 iya kuziswa | I-Androidsis
Ii-SoCs eziselfowuni zeQualcomm zingumqolo wenqwaba yee-smartphones eziphambili ezikhutshwa minyaka le. I-chipmaker esekwe e-US inegama elomeleleyo lokuvelisa ii-CPU ze-notch eziphezulu kunye nee-GPU kunye neemodem ezinokuthenjwa. Kungako kunjalo wonke umntu ujonge kulowo ulindileyo ekudala elindelwe kwi-Snapdragon 845 SoC yangoku.
Ngelixa iQualcomm ibonakala ngathi isemva kakhulu kulo nyaka, ingxelo ibonisa ukuba kunokwenzeka Sibonile i-chipset yokuqala ye-7nm yenkampani ngoDisemba 4. Ngaloo mini, inkampani iya kubamba umsitho kwiNgqungquthela yeTekhnoloji yeQualcomm kwaye amalungu eendaba aseTshayina afumene izimemo ngeengxelo ezichaza oku kulandelayo: "Yiba nesibindi sokuba ngamava eselula e-5G."
Umnyhadala weentsuku ezi-3 uza kwenzeka eHawaii, kwaye isimemo sikwanayo isixhobo seXiaomi VR ngeQualcomm Snapdragon 821.
Xa kuziwa kwi-specs ze-Snapdragon 8150, intetho yangoku yile kulindeleke ukuba ize noyilo olusisiseko se-CPU yoyilo, iyelelene kwi Kirin 980. I-chipset etyholwayo ifunyenwe kutshanje kwi-AnTuTu kwaye yafumana amanqaku aphakamileyo angama-362,292 angabonwanga kuso nasiphi na isixhobo se-Android. Inye kuphela i-CPU enokusondela yi-Huawei's Kirin 980, eyafumana amanqaku angama-311,840 kwibhentshi. Olu hlobo lulandelwa yi-Snapdragon 845 kwi-Black Shark Helo, eyayingamanqaku angama-301,757. (Fumanisa: Ezona Phones zinamandla zi-10 zika-Okthobha u-2018, ngokwe-AnTuTu Benchmark).
Uyilo loyilo oluphambili lulindelwe ngolu hlobo lulandelayo: kuya kubakho isiseko esikhulu esikhulu esivaliweyo kwi-2,84 GHz, ii-cores ezintathu eziphakathi ezivaliweyo kwi-2,4 GHz, kwaye ekugqibeleni ii-cores ezine ezisebenzayo zitshixiwe kwi-1,78 GHz. I-GPU ngaphakathi kukholelwa ukuba yiAdreno 640, eyi-20 yepesenti ebhetele kunenguqulo yangaphambili, i-Adreno 630 ye-SD845.
Umendo opheleleyo kwinqaku: I-Androidsis » Izaziso » I-Qualcomm's Snapdragon 4 iya kuziswa ngoDisemba 8150
Uyifaka njani iprinta engenazingcingo kunye nokuprinta amaxwebhu kwi-Android